Mashiinka Mashiinka Goynta, Mashiinka Mashiinka Dhagaxa ah - Huashili
Injineer caawimaad fog
Diirad saarida macaamiisha ， waxay xaliyaan dhibcaha xanuunka macaamiisha.
Aaminaad, ixtiraam, ganacsi wadajir ah, danaha guud.
Tayada wax soo saarku had iyo jeer waa udub dhexaadka koritaankayaga.
Tikniyoolajiyadda Huashili waa nooc ka mid ah cilmi baarista otomaatikada qalabka farsamada iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka tikniyoolajiyadda sare. Shirkaddu waxay leedahay khibrad badan oo soo saarista qalabka otomaatigga ah, karti wax soo saar, heer teknoolojiyad iyo awood dhaqaale oo dhammaystiran isla warshadda oo ku jirta safka hore ee warshadaha gudaha, cilmi baarista iyo qalabaynta qalabaynta otomaatiga ah, qalabka waxqabadka iyo qaabaynta ayaa ku jirtay. heerka hogaaminta gudaha, farsamooyin dhowr ah. waxay buuxiyeen marankii guriga
1. Xulashada: iyadoo loo eegayo cabbirka goynta dhabta ah ee shirkadda lafteeda, dooro midda kugu habboon naftaada, qaabka mashiinka dhalada2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, Model 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, tusaale3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm Si loo tixgeliyo saldhiga warshadda ...
Sidee loo doortaa dhagaxa jilicsan ee mashiinka xajmiga darajada 45?
Iyada oo caan ku tahay dhagxaanta, qalabka farsamaynta kala-soocidda dhagxaanta dhagxaanta ayaa sidoo kale si tartiib tartiib ah suuqa u soo galay, si aan kuugula taliyo qalab wax ku shiidaya geesaha dhagxaanta leh oo aad u ficil ah, 45 darajo marka loo barbar dhigo miinshaarka miinshaarista wax jaridda ...
At Guangzhou Toddobaadkii Naqshadeynta iyo Carwadii Dhagaxa ee sannadkan, waxaan ku soo qaadannay maaddo heleysa culeys badan. Warshado badan ayaa ku faraxsan xiisaha dhagxaanta.
Waa maxay dhagax la shiiday? Waa dusha isafgarad aad u heer sare ah oo uu sameeyay nin sameeyay oo loogu talagalay adkeysiga. Waxay jirtay dhowr sano hadda, markaa haddii aadan horay ugu been abuurin, waa laga yaabaa inaad dhowaan soo gasho. Si kastaba ha noqotee, waxaad dooneysaa inaad barato sida loo gooyo dhagxaanta la jeexjeexay sida saxda ah ...